Nei Mwari Achitirega Tichitambura? | Bvunza Mwari
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Malagasy Mizo Moore Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
Mubvunzo 3: Nei Mwari Achindirega Ndichitambura?
BABA vaIan vaiva chidhakwa chemakoko. Pasinei nokuti akakura achiwana zvaaida, aisawana rudo rwaaida chaizvo kuti baba vake vamuratidze. Ian anoti: “Ndakanga ndisinganyanyi kuvafarira nemhaka yekunwa kwavaiita uye mabatiro avaiita amai vangu.” Sezvaaikura, Ian akatanga kusava nechokwadi kana Mwari ariko. “Ndaizvibvunza kuti, ‘Kana Mwari ariko zvechokwadi, nei achirega vanhu vachitambura?’”
Ungasava hako nematambudziko muupenyu, asi zvingakubata-bata paunoona vanhu vasina mhosva vachitambura. Zvisinei, mubvunzo wokuti nei vanhu vachitambura unotonyanya kukunetsa kana uriwe uri kutambura sezvakaitika kuna Ian, kana kuti kana warwarirwa kana kufirwa.
Vanofunga kuti Mwari anotirega tichitambura kuti atidzidzise kuzvininipisa uye kunzwira vamwe tsitsi. Vamwe vanodavira kuti vakamborarama nomumwe muviri, saka vanoti kutambura kwavari kuita iye zvino kunokonzerwa nezvivi zvavakaita panguva iyoyo.
Dzokuti Mwari haanzwiri tsitsi vanhu vanotambura saka zvakaoma kumuda. Mwari ane utsinye.
Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti kutambura kwevanhu haisi mhosva yaMwari. “Kana munhu achiedzwa, ngaarege kutaura kuti, ‘NdiMwari andiedza,’ nokuti Mwari haangaedzwi nezvakaipa kwete. Iye Mwari pachake haaedzi munhu.” (Jakobho 1:13, Bhaibheri Rinoera) Pfungwa yokupa Mwari mhosva yokutambura kwevanhu haitoenderani nezvinodzidziswa neBhaibheri nezvounhu hwake. Sei tichidaro?
Rudo ndihwo unhu hwaMwari hwatinonyanya kumuziva nahwo. (1 Johani 4:8) Bhaibheri rinonyatsosimbisa pfungwa iyoyo parinofananidza Mwari naamai vanoyamwisa. Mwari anobvunza kuti: “Mudzimai angakanganwa mwana wake anoyamwa zvokuti angasanzwira tsitsi mwanakomana wedumbu rake here? Kunyange vakadzi ava vangakanganwa havo, asi ini handizokukanganwi.” (Isaya 49:15) Ungafungidzira here amai vane rudo vachikuvadza mwana wavo nemaune? Aiwa, asi mubereki ane rudo anoita zvose zvaanogona kuti mwana wake asatambura. Ndozvazvakaitawo naMwari, haasiye anoita kuti vanhu vasina mhosva vatambure.—Genesisi 18:25.
Kunyange zvazvo Mwari aine hanya, vanhu vasina mhosva vari kutambura. Unganetseka kuti: ‘Kana Mwari aine hanya nesu uye aine simba rose, anoregererei kubvisa zvose zvinoita kuti titambure?’
Pane zvikonzero zvakanaka zvinoita kuti Mwari ambotirega tichitambura. Ngatimbokurukurai chimwe chete bedzi: Kazhinji vanhu ndivo vanoita kuti vamwe vanhu vatambure. Nhubu dzakawanda nevaya vanoitira vamwe utsinye vachivadzvinyirira havadi kuchinja maitiro avo. Saka kuti Mwari abvise chacho chinonyanya kukonzera kutambura, anofanira kuparadza vanhu vakadaro.
Paaitsanangura kuti sei Mwari asati aparadza vanhu vanoita zvakaipa, muapostora Petro akanyora kuti: “Jehovha haanonoki pane zvaakapikira, sezvinofunga vamwe vanhu kuti kunonoka, asi anokushivirirai nokuti hapana waanoda kuti aparadzwe asi anoda kuti vose vasvike pakupfidza.” (2 Petro 3:9) Mwoyo murefu waJehovha Mwari unoratidza kuti ane rudo nengoni.
Zvisinei, munguva pfupi iri kuuya Jehovha Mwari ‘achatambudza vaya vanotambudza’ vasina mhosva. Achavatongera “kuparadzwa nokusingaperi.”—2 VaTesaronika 1:6-9.
Ian ambotaurwa akawana mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo yaaiva nayo panyaya yokutambura. Zvaakadzidza zvakachinja maonero aanoita upenyu. Verenga nyaya youpenyu hwake iri papeji 13 yemagazini ino.munyaya inotevera yakanzi “Bhaibheri Rinochinja Upenyu”.
Jesu Akatii Nezvokutambura?
Jesu haana kumbopa Mwari mhosva yokutambura kwaiita vanhu vaaiona. Asi akaita zvinotevera:
Jesu akaratidza kuti Mwari haarangi vanhu vasina mhosva nokuita kuti vatambure. Akarapa vanorwara, vakaremara, uye mapofu. (Mateu 15:30) Zvishamiso zvaaiita zvinotidzidzisa zvinhu zviviri zvinokosha: Chokutanga, Jesu akashandisa simba raMwari kuti aite kuti vanhu vasatambura, kwete kuti avatambudze. Chechipiri, haana kuporesa vanhu zvokungoti zvimubve. Paaiona vanhu vaitambura, ‘aisiririswa.’ (Mateu 20:29-34) Jesu ainyatsoratidza manzwiro aiita Baba vake nezvokutambura kwevanhu. Saka zvaaiita nezvaaitaura zvinotidzidzisa kuti Mwari anoshungurudzika paanoona vanhu vachirwadziwa uye anoda kuvasunungura pamarwadzo iwayo.—Johani 14:7, 9.
Jesu akaratidza kuti Satani Dhiyabhorosi ndiye honzeri yokutambura kwevanhu. Akati: “Iye akanga ari muurayi paakatanga.” (Johani 8:44) Akatiwo Satani Dhiyabhorosi ndiye “mutongi wenyika ino” uyo “ari kutsausa nyika yose inogarwa.”—Johani 12:31; Zvakazarurwa 12:9.
Jesu akati pachasvika nguva yokuti vanhu vanenge vasingachatamburi. Akadzidzisa vateveri vake kunyengetera kuti: “Baba vedu vari kumatenga, . . . Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika, sezvakunoitwa kudenga.” (Mateu 6:9, 10) Umambo hwaMwari pahuchauya, vanhu vanenge vasingachatamburi panyika, sezvakangoitawo kudenga kusingatamburwi.
Pane zvaakaratidza muapostora Johani, Jesu akarondedzera zvichange zvakaita upenyu hwevaya vachange vachitongwa noUmambo hwaMwari. Panguva iyoyo, Mwari “achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve. Zvinhu zvokutanga zvapfuura.”—Zvakazarurwa 1:1; 21:3, 4.